Misy fotoana amin'ny fiainan'ny tompona tranokala rehetra, na izany aza, rehefa mila mihoatra ny fampiasa io ianao. Miara-miasa amin'ny WordPress rakitra .htaccess dia mety ho fomba iray hanaovana izany. Ity rakitra ity dia rakitra fototra iankinan'ny tranokalanao, ary miahiahy indrindra amin'ny fomba fiasan'ny permalinks an'ny tranokalanao.
Raha vantany vao nametraka fifandraisana FTP ianao, dia haseho anao ireo rakitra rehetra mandrafitra ny tranokalanao. Topazo maso ireo lahatahiry ireo, dia hahita ilay antsoina hoe root Directory ianao.